SAWIRRO, 83 JIR GUURSADAY 75 JIR – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeARIMAHA BULSHADASAWIRRO, 83 JIR GUURSADAY 75 JIR
August 27, 2018 Falastiin Axmed ARIMAHA BULSHADA, WARARKA MAANTA Comments Off on SAWIRRO, 83 JIR GUURSADAY 75 JIR
(Warqaat.com)—Waxaa ay ahayd Riyo u rumoway Apollo Kinga iyo xaaskiisa Joyce Njoki, kaddib 58 Sano oo ay wada noolaayeen,hadda ayey go’aansadeen in ay Xaflad aroos ah dhigtaan.
Joyce Njoki oo cabitaan siineysa Odaygeeda.
Guurkoodii ugu horreeyay waxaa la shaaciyay December 11, 1959kii,waxaana markaas ka shaqeeyay Odayaasha labada Lamaane.
Apollo Kinga oo Taajka ka qaadaya xaaskiisa.
Ku dhawaad lixdan Sano ka hor ayey shaaciyeen xiriirkooda iyo Jacaylkooda,waxaa ay munaasibad ku dhigteen Magaalada Kandara, ee Gobolka Murang’a ee dalka Kenya.
Njoki,oo ka ka jawaabeysa weydiimaha Baadariga,eegeysana Odaygeeda.
Labadooda sida ay ka sheegeen xafladda guurkooda waligood iskuma dhicin,waxaana ay jacaylkooda ka billaabeen markii ay isku fasal ka noqdeen Dugsiga hoose.
Wadaadka Baadariga ah oo ka hadashiinaya Odayga guursanaya.
“Waxaan muddo dheer raadinayay oo aan sugi la’aa maalintan oo kale,ugu dambeyn waa ay timid,nolosha waxaa ugu wanaagsan ama ay badbaado ku jirtaa marka aad hesho qof ku fahmaya”ayey tiri Njoki, oo jir 75 ah.
Xafladda Guurkooda oo dhacay Sabtigii la soo dhaafay waxaa ka qeybgalay boqolaal qof oo isugu jiray dad da’ ah, dhallinyaro iyo Carruur,waxaana qof kasta xiiseynayay sida uu u dhacayo Arooska Nin 83 jir ah oo guursanaya Haweeney 75 jir ah.
Sawir Wadareed ay Lamaanaha da’da ah la galeen ka qeybgalayaasha Arooskooda.
Apollo Kinga,ayaa dhaliilay dhallinyarada hadda ee guurka gala kaddibna is fura,waxaa uu ku eedeeyay in ay ka fiirsi la’aan isguursadaan islamarkaana durba is furan.
Lamaanaha da’da ah oo galay Sawir gaar ah.
Waxaa uu dhallinyarada kula taliyay in aysan ku deg deign guurka,iskana ilaaliyaan furriinka faraha badan oo uu sheegay in uu mustaqbal xumo u yahay Ubadka.
Dhalinyaro Badan Oo Lagu Xiray Magaalada Laas-Caanood…
2,139,777 total views, 14,359 views today
2,139,777 total views, 14,359 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
2,139,427 total views, 14,356 views today
2,139,427 total views, 14,356 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
2,139,431 total views, 14,354 views today
2,139,431 total views, 14,354 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
2,138,431 total views, 14,349 views today
2,138,431 total views, 14,349 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
2,138,371 total views, 14,349 views today
2,138,371 total views, 14,349 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]